Home Wararka Maanta Mareykanka oo soo saaray digniin cusub oo madaxda Soomaalida ku socota
Mareykanka oo soo saaray digniin cusub oo madaxda Soomaalida ku socota
Dowladda Mareykanka ayaa markale luuqad adag kula hadashay madaxda Soomaaliyada, ayada oo ku hanjabtay inay si gaar ah tallaabo uga qaadi doonto ciddii caqabada ku noqota dardar-gelinta doorashada, gaar ahaan midda Golaha Shacabka ee ka socota dalka.
Qoraal kooban oo kasoo baxay Safaarada Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu dalbaday in madaxda Soomaalida ay ka dhabeeyaan ballan-qaadkoodii ahaa in doorashada Golaha Shacabka lagu soo gaba-gabeeyo 25-ka bishaan, si lagu kalsoonaan karo oo daah-furan.
“Dowladda Mareykanka waxay la xisaabtami doontaa ciddii carqalad ku keenta ama carqaladeysa hanaanka doorashooyinka,” ayaa lagu yiri qoraalka Safaarada Mareykanka ee Soomaaliya.
Qoraalka kooban ee kasoo baxay Safaarada ayaa daba socda war-saxaafadeed ay goor sii horeysay si wadajir u soo saareen xubnaha Beesh Caalamka, oo ay ku dalbanayeen in si deg-deg ah loo dhameystiro doorashada.
Xubnaha Beesha Caalamka oo uu qeyb ka ahaa Mareykanka ayaa waxay sheegen inay si dhow ula socdaan doorashada, ayna ka warhayaan in doorashada kuraasta Golaha Shacabka ay qiyaastii kala bar qabsoomtay.
“Saaxiibada caalamku waxay mar kale hoosta ka xarriiqeen baahida loo qabo in sixidda qaladaadka habraaca loo wajaho si dhexdhexaad ah oo daah-furan si loo dhiso kalsoonida geeddi-socodka doorashada iyo natiijadeedaba,” ayaa lagu yiri qoraalka ay sida wada-jir ah u soo saareen xubnaha Beesha Caalamka.
Si kastaba, Mareykanka ayaa kamid ah dalalka sida dhow isha ugu haya doorashooyinka iyo xaalada kala guurka oo ay Sooamaliya ku daahday, wuxuuna cadaadis xoogan ku saaraya madaxda in si dhaqso ah loo dhameeyo doorashada Golaha Shacabka, si loo guda-galo midda madaxweynaha.